Apple inomutsa Steven Spielberg's "Anoshamisa Tales" akateedzana | Ndinobva mac
Kana iwe uine makore mashoma ekuzvarwa, zvingangoita kuti iyo Inoshamisa Nhau dzakateerana unoziva kwauri. Nhau Dzinoshamisa, Nhau Dzinoshamisa muChirungu, uye Nhau Dzinoshamisa muLatin America, yaive nhevedzano yeNBC kutepfenyura pakati pa1985 na1987 pasi pebhatani raSteven Spielberg. Sekureva kweThe Wall Street Journal, Apple yasvika pachibvumirano nekambani yekugadzira yekutanga, Amblin Television uye neNBC Universal kumutsa akateedzana Anoshamisa Nhau, nhepfenyuro uko vamwe vevane mukurumbira vatambi nevatungamiriri vemakore apfuura vakashanda. Parizvino, mwaka wekutanga Ichave inoumbwa nezvikamu gumi uye ichave nebhajeti yemamiriyoni mashanu emadhora.
Mukomana weCupertino anoronga kuisa mari inodarika $ 1.000 bhiriyoni mune yekutanga Netflix -style audiovisual zvemukati, uye mwaka mutsva weAnoshamisa Tales chichava kutanga kukuru. Mumakore ayo akateedzana akateedzana, Nhau Dzinoshamisa dzakawana ratidziro dzeshungu idzo zvakare akamutendera kuhwina 5 Emmy Awards, pamasarudzo gumi nemaviri yaakawana. Panguva ino uye apo pasina chibvumirano chepamutemo, hatizive kana Steven Spielberg achange ari kumashure kwekugadzirwa.
Sekureva kweVaraidzo Svondo, mutori mukuru achava Bryan Fuller pamwe naDarryl Frank naJastin Falvey. Imwe yemabasa ekupedzisira aBryan Fuller ndeye yakanakisa akateedzana Hannibal mukuwedzera kuchinjika kwenoverengeka yeAmerican Gods. parizvino ichitenderera kuburikidza neAmazon Prime. Jennifer Salke, purezidhendi weNBC Enternainment anoti:
Zvinofadza kusangana zvakare nevamwe vedu Zack naJamie mumahofisi matsva eApple. Tinoda kuve kumberi kwekudyara kweApple uye hatigone kufunga nezve chivakwa chiri nani pane chavanoda chaSpielberg 'Amazing Tales' franchise nenjere Bryan Fuller.
Parizvino hatizive kuti mwaka uno wechitatu weAnoshamisa Tales uchasvika riini paApple Music, uko ichazotepfenyurwa chete, asi tichifunga nezvekuratidzwa kweApple mune izvi, tinogona kumirira zvakachengeteka makore akati wandei kusvikira nhevedzano yaona chiedza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple inomutsa Steven Spielberg's "Anoshamisa Tales" akateedzana
Iyo 15 TB MacBook Pros yave kuwanikwa paUS yakagadziridzwa webhusaiti